Boky Voalohan'ny Makabeo - Ny Baiboly
Toko 1 Aleksandra ilay malaza - Ny nidiran'ny fanaon'ny Greka tany Palestina - Antiokosa Epifana, fandrobana ny Tempoly, fanenjehana ny Jody tsy nivadika.
Toko 2 Nanomboka ny ady masina Matatiasa mpisorona.
Toko 3 Nandresy hatrany Jodasa, ka azony indray Jerosalema; dia novelominy tao indray ny fanompoana an'Andriamanitra marina.
Toko 4 Ny nandresen'i Jodasa Makabeo an'i Gorjiasa sy Lisiasa - Ny nanadiovana ny Tempoly sy nitokanana azy indray.
Toko 5 Ny nandresen'i Jodasa an'Idomea, Beana, sy Amona - Ny fanafihana any amin'i Galilea sy Galaada - Faharesen'i Josefa sy Azariasa.
Toko 6 Fahafatesan'i Antiokosa Epifana - Ady tamin'i Antiokosa Eopatora - Nafahirano Jerosalema.
Toko 7 Nirahin'i Demetriosa I hamely ny Jody, Bakidesa sy Alsima - Ny faharesen'i Nikanora.
Toko 8 Naniraka ambasadaoro tany Roma Jodasa.
Toko 9 Fahafatesan'i Jodasa Makabeo - Jonatasa mandimby azy - Ady maro tamin' i Bakidesa.
Toko 10 Notaomin'i Demetriosa I sy Aleksandra Epifana, Jonatasa ka nikambana tamin'i Aleksandra, izay nanome azy fiandrianan'ny mpisorona lehibe sy nanasa azy tamin'ny fampakaram-badin'ny zanany tamin'ny zakavavin'i Ptolemea - Ny nandresen'i Jonatasa an'i Apolloniosa jeneralin'i Demetriosa II.
Toko 11 Nony maty Aleksandra sy Ptolemea, nanao fanekem-pihavanana tamin'i Demetriosa Jonatasa sady nanampy azy hanafoana fikomiana anankiray - Tsy fankasitrahana anefa no azony, ka nandray ny fanekem-pihavanana tamin'i Antiokosa VI sy Trifona izy.
Toko 12 Nohavaozin'i Jonatasa ny fanekena tamin'i Roma sy Sparta - Resiny mafy Demetriosa - Lavo tamin'ny fandrika nafitsok'i Trifona izy.
Toko 13 Nandimby ny rahalahiny, izay tsy azony novonjena Simona, ka nanosika an'i Trofona, nanao ny fasam-pianakaviana, ary nanamafy an'i Jodea - Nankasitrahan'i Demetrosa izy, ka nitana an'i Gazara sy Akra ao Jerosalema.
Toko 14 Fiadanana any amin'Isrealy - Nony voasambotry ny Parta Demetriosa, Simona kosa nitondra amim-pahendrena sy nandray taratasy avy any Sparta sy avy any Roma - Nankasitrahan'ny vahoaka izy, ka naraikiny ho mpanapaka sy mpisorona lehibe mandrakariva.
Toko 15 Nankatoavin'i Antiokosa ny fahefan'i Simona, nefa nirahiny hamely azy Sendebe, na dia teo aza ny taratasin'ny Romana.
Toko 16 Ny nandresen'ny zanak'i Simona an'i Sendebe - Ny namonoana an'i Simona.